Booliiska Kenya Oo Lamaane Soomaali Ah Ku Eedaysay Inay Xidhiidh La Leeyihiin Kooxda Al-shabaab | Himilo Media Group
Kenya, 9 Meey, 2018 (Himilo) – Booliiska Dalka Kenya ayaa xabsiga dhigay Lamaane Soomaali ah oo ay ku eedeeyeen in ay xidhiidh la leeyihiin Ururka Al-Shabaab.
Yaasiin Cabdalle Xuseen (Abu Sumeiya ) oo 42 sano jir ah iyo Xaaskiisa, Fartuun Maxamed Guuleed, oo 41 sano jir ah ayay Booliiska Kenya kusoo oogeen dambiga ah in ay xidhiidh la leeyihiin Al-shabaab, iyadoona xiliga lasoo qabanayay ay joogeen Xaafadda ay Soomaalidu ku badan tahay ee Islii (Eastleigh) ee Magaalada Nairobi.
Labadan Qof ayaa sidoo kale la aaminsan yahay inay gacan saar la leeyihiin Cabdi weli Maxamed Guuleed, oo loogu yeedho ( Abdiweli Kamaure) oo ah Maskaxdii ka dambaysay weerarkii kal hore ka dhacay Mandheera Kenya.
C/wali Maxamed Guuleed ( Abdiweli Kamaure) oo ah walaalka la dhashay Fartuun ayaa la rumaysan yahay inuu soo maleegay weerarkii Novembar 2014-kii lagu qaaday Bas marayay nawaaxiga Mandheera, kaasoo lagu laayay Dad u badnaa Kiristaan sida Booliiska Kenya ay sheegeen.
Yaasiin Cabdiale Xuseen , oo ah ganacsade ka shaqeeya howlaha qandaraasyada ayaa la sheegay in uu dhaqaale badan ku bixiyo dhaq-dhaqaaqyada Hubeysan ee ay Al-Shabaab ka fuliyaan qaybo ka mid ah Kenya iyo Soomaaliya.
Dowladda Kenya ayaa dhowr jeer oo hore xabsiga u taxaabtay dad isugu jira Soomaali iyo Kenyaan, kuwaas oo ay sheegtay in ay xidhiidh la leeyihiin dagaalyahannada Al-shabaab.